Xulka qaranka France uu hogaaminayo Didier Deschamps oo la kulmay dharbaaxo xoogan kahor koobka aduunka 2018 – Gool FM
Xulka qaranka France uu hogaaminayo Didier Deschamps oo la kulmay dharbaaxo xoogan kahor koobka aduunka 2018
(France) 12 Juunyo 2018. Xulka qaranka France ayaa la kulmay dharbaaxo xoogan inta lagu gudi jiray tababarka maanta ee Talaado ah, kahor inta aysan Sabtida kulankooda ugu horeeya ee koobka aduunka 2018 la ciyaarin Australia.
Sida laga soo xigtay wargeyska “Mirror” ee dalka England xidiga kooxd Paris Saint-Germain ee Kylian Mbappé ayaa la kulmay dhaawac inta uu ku gudi jiray cashiradii tababarka ee xulka qaranka France, kadib markii ay isku dhaceen difaaca Marseille Adil Rami.
Wargeyska ayaa wuxuu hadalkiisa intaas kusii daray in Kylian Mbappé uu ka dhaqaaqay tababarka, wuxuuna u dhaqaaqay dhanka qolka labiska si uu u helo baaritaano caafimaad.
Laakiin wargeyska reer England ayaan shaaca ka qaadin go’aanka xidiga kooxd Paris Saint-Germain ee Kylian Mbappé kaga aadan inuu qeyb ka noqon doono iyo inkale kulanka sabtida ay koobka aduunka 2018 kaga daah furan doonaan dhigooda Australia.
Koke oo rajeeyay in Cristiano Ronaldo uu saamayn ku yeelan doono khilaafka kala dhexeeya madaxda Real Madrid
Xiriirka kubada cagta dalka Spain oo war rasmi ah kasoo saaray heshiiska Real Madrid ay la gaartay Julen Lopetegui